एक मुस्लो धूवाँ - नेपाल
- अनुपम रोशी
फेर िपनि क्षणभरको खुसीलाई मैले किन जीवन ठानँे? मेरो जिन्दगी अरूले भोगिदिने पनि त होइन। न मभित्रको अप्ठ्यारो अरूले बाँचिदिने हो। फेर िकिन भ्रम हुन्छ जिन्दगी? किन अपेक्षा बढ्छ मनमा? मैले जति धेरै सुखको अनुभूति गर्न खोजेँ, उति गहिरो दुःख जीवनको साथी बनिदियो। र, मन दुःखको भित्ताजस्तो भएर चुपचाप बसिदियो।
प्रकृति, पुरुष, यौन र जिन्दगी, के हो वास्तविक सत्य? किन मानिसहरू प्रेम गर्न बाध्य हुन्छन्? या, फेर िप्रेमको बहानामा यौनकै उत्तेजना मेट्छन्। सधैँ विवादमा पर्छन् सवालहरू। र, अन्योलग्रस्त हुन्छ मस्तिष्क।
जुन चीजलाई मैले सुखको संसार भनेर पछ्याएकी थिएँ। त्यही दुःखको गहिरो खाडल भएको छ। उम्किनै नसक्ने गरी जेलिएको यो सम्बन्धको आकाश फैलिन्छ, फैलिन्छ र साँघुरन्िछ एकाएक।
मानिसहरू भन्छन्, त्यो सामाजिक प्रेम हो। तर, मेरो अनुभूतिमा, प्रेमभन्दा ठूलो त्यो पीडाको नशा हो। सँगै जोडिएर आउने सुख-दुःखजस्तो, त्यही पीडा फेर िप्रेमको नशा।
अँध्यारो व्याप्त छ। र, सुनसान छ चारैतिर। यतिबेला मेरो अगाडि बलिरहेका पाँचवटा चिता छन्। चितामा मानिसहरू सुतेका छन् या फगत चिता। मलाई जान्ने मन हुँदैन। म हेररिहेछु, बलिरहेको आगो र उडिरहेको धूवाँ। मलाई मेरो जीवनको तथाकथित दुःख त्यही धूवाँमा उडेर गएजस्तो लाग्छ। मेरो अनुभूतिको आकाश त्यही आगोमा बलेर खरानी हुँदै छ जस्तो देखिन्छ।
कुनै पुस्तकमा रुसोले भनेका छन्, 'मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ र परतन्त्र भएर मर्छ।' तर, मलाई लाग्छ, मानिस परतन्त्र नै जन्मिन्छ र परतन्त्र नै मर्छ। किनभने, अनुभव स्वतन्त्र भएको मलाई थाहा छैन। स्वतन्त्रतामा अनुभूतिको कुनै आकार भेटिँदैन। अनुभव सधँै परतन्त्र हुन्छ। र, मन त्यही अनुभूतिले ढाकिँदै जाने आकाश हो। जहाँ सुखका थोरै र दुःखका धेरै अभिव्यञ्जना लुकेर बस्छन्।
म घाटतिर हेर्छु। लाग्छ, यो मध्यरातमा बलिरहेको मान्छेले, जीवनको दुःखलाई यहीँनेर छाडेर गएको छ। र, त्यो दःुख मान्छे पोल्न बसेका ती दुई घाटेले लिएका छन्। किनभने, उनीहरूको आँखामा अरू थुप्रै मानवदेहलाई खरानी बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। ती चिताका खरानीसँग उनीहरूका थुप्रै कलिला सन्तानका पेट जोडिएका छन्। भविष्य र सपना सजिएका छन्। यो मध्यरातमा स्खलित भएर दुनियाँ सुतेको हुनुपर्छ। तर, आर्यघाट कहिल्यै निदाउँदैन। पृथ्वीकै विशिष्ट प्रजातिको धूवाँ उडाउँदै रातदिन बलिरहन्छ। बलिरहन्छ...।
घाटेलाई लास छिटोभन्दा छिटो खरानी बनाउने हतारो छ। घोचेर, पिटेर, पटकपटक फर्काएर उनीहरू लासको अस्तित्व खरानी बनाउन प्रयत्नरत देखिन्छन्। उनीहरूले फर्काउने क्रममा लासको आधा जलेको खुट्टा मेरो दृष्टिमा ठोकिन्छ। चिताबाहिर परेको त्यो पै ताला देखेर म मर्माहत हुन्छु। केही बेर घोरएिर म त्यो गोलीगाँठासम्म आगो सल्केको पैताला हेररिहन्छु। छेउमा उभिएका ती दुई जीवित मानवले त्यो पैतलालाई लट्ठीले उठाउँछन् र चिताको मध्यभागमा फ्याँकिदिन्छन्। अनि, बल लगाएर त्यो डढेर कक्रक्क परे को मानव शरीरलाई घोच्न थाल्छन्। पुनः डन्डाको सहाराले माथि उठाएर सकेसम्म छिटो जल्नका लागि तयार पारििदन्छन्।
"किन यस्तो निर्दयी भएर लास पिटेको?" मेरो प्रश्न सुनेर एकछिन दुवै जिल्ल पर्छन्। र, सोध्छन्, "के भो? के भन्नुभएको?"
"कसले यसलाई हाम्रो चिताको साइजभन्दा लामो हुन भन्यो?" मेरो असन्तुष्टिलाई उल्टो उनीहरूले प्रश्न गर्छन्। म स्तब्ध हुन्छु। र सोध्छु, "के मान्छे मर्ने बेलामा पनि चिताको साइज नापेर मर्नु? चिता मान्छेको साइज अनुसार तयार गरन्िछ या मान्छे चिताको साइज नापेर मर्ने गर्छन्?"
"हो बेवारसिे मुर्दा ! यो मध्यरातमा हामी तिनै बेवारसिे मुर्दा जलाउँछौँ। जसका कोही आफन्त हँुदैनन्। जसका कोही मलामी हुँदैनन्।"
"राँगा पोल्नु र मान्छे पोल्नु एउटै कुरा होइन बैनी। राँगाको शरीर खरानी बनाइँदैन। तर, हामी मानव शरीर खरानी बनाउँछौँ।" वास्तवमै उसको जवाफमा गहिरो दर्शन थियो। वास्तवमै मानवमृत्यु एउटा उपयोगहीन मृत्यु हो। वायुप्रदूषण विकारयुक्त दुर्गन्ध। उसो त जीवित रहुन्जेल मानिसले आफ्ना लागि भनेर पाईपाई सञ्चित गर्छ।
"हुन्छ। तर, आउँदैनन्। तपाइर्ंलाई डर लाग्दैन?" उसले भन्छ।
पदार्थ, चेतना, शरीर अनि आत्माको मिलन, जीवनबोध र फेर िमृत्यु।
भनिन्छ, मृत्यु मानिसको स्थूल शरीरबाट, सूक्ष्म शरीर बाहिर निस्कने प्रक्रिया हो। पुरानो जीर्ण शरीरलाई छाडेर नयाँ शरीरमा प्रवेश गर्ने तयारी हो। तर, त्यो जीर्ण शरीरसँग जोडिएका पूर्ण-अपूर्ण सम्बन्धको आकाश कहाँनेर छोडिन्छ? र, कसरी समेटिन्छ फेर िअर्को यात्रा?
धूवाँ उडिरहेकै छ। घाटेहरू थकित देखिन्छन्। र, चितामा बाँकी छन्, जल्न बाँकी हाडखोरहरू। म निःशब्द हेररिहेछु जीवनको सत्य र प्रेमको गहिरो अन्योल।
जीवनको सुख-दुःख भनेको मानिसको शरीर रहेछ सायद। जसलाई आगोको सिरानीमा राखेर निदाएको दिन नै सारा उत्तरहरू भेटिन्छन्। सम्भवतः त्यही मुस्लो धूवाँमा उड्न थालेपछि तृप्त हुन्छ, मानिसको अतृप्त आत्मा ।